Njem Iceland | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Islandia, Ihe ị ga-ahụ
Ọ bụrụ na-amasị gị bath bath na anụ ọhịa, mgbe niile ịma aka, mgbe ahụ ị ga-eleta Iceland. Prime Minista ekwuputala na ha nwere atụmatụ mepee ndị mba ọzọ si mba ọzọ malite na 15 ọnwa nke ọnwa a.
Kedu? A ga-eme nyocha ngwa ngwa maka Covid-19 na ọdụ ụgbọ elu, mgbe ị bịarutere, ma ọ bụrụ na ọ nwaa na ọ dị mma, enwere ụbọchị 14 nke iche iche. Enweghị ozi ndị ọzọ, mana enwere olile anya na njem ndị ahụ ga-eji nwayọ nwayọ laghachi na nkịtị. Yabụ ịchọrọ ịme ọmarịcha njem gaa iceland?
2 Nlegharị anya Iceland
Ọ dị na northwest Europe, ọ bụ agwaetiti efi Atlantic Po so, na isi obodo ya bụ Reykjavik. Nwere otutu oru mgbawa na ala ọ bụkwa ya mere o ji nwee ugwu, ugwu, ugwu na osimiri.
Mụ nwoke mbụ nwere obi ike ịzọ ụkwụ n'àgwàetiti ahụ ma biri na ya bụ Nordic na Gaelic na agwaetiti ahụ nọkwa n’aka Norway na Denmark n'akụkọ ihe mere eme ya, ruo mgbe nnwere onwe ikpeazụ ya, nke dị na narị afọ nke iri abụọ.
Islandia ọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya nke ka dị n'ime otu Ọdịmma Welfare. N'agbanyeghị eziokwu na akụ na ụba ya bụ ahịa ahịa, ọ na-enye ndị bi na ya ọzụzụ na ahụike n'efu. O nwere nsogbu akụ na ụba dị ukwuu na 2008, ekele maka ụlọ akụ, ma ugbu a, ọ gbakeela, ọ bụ ezie na njem bụ ihe dị mkpa, oria ojoo a enwere obodo inyocha.
Nlegharị anya Iceland
Kaadị ama ama ama mba na-akwalite bụ nke ya n'èzí ọdọ mmiri geothermal, yabụ ebe ahụ ka anyị ga-ebu ụzọ gawa. Ihe omumu nke agwaetiti a putara na otutu mmiri oku di, ma obu eziokwu na obughi rue iri abuo nke iri na ka nke a bu ihe ndi njem na ndi mmadu.
Osimiri ọdọ mmiri a kacha mara amara bụ nke Oke Osimiri Blue. Ọ dị na mpaghara lava na Reykjanes Peninsula, nso Reykjavík. Enwere osimiri osimiri mara mma mara mma na mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, nke na-erute okpomọkụ a na obere nsị nke mmiri ọkụ. Kere nte paradise editiede. Ana m ahapụ ihe niile site na oge ole m ga-anọ ...
Maka ụbọchị spa nke Lagoon ga-ede akwụkwọ ma ị nwere ike ịnọ otu ụbọchị ma ọ bụ nọrọ na họtel. I nwekwara ike iri nri na Lava Restaurant, nke dị n'ime mgbidi lava na ọdịda anyanwụ nke ọdọ mmiri ahụ, jiri nnukwu nlele. Jụọ onwe gị gịnị mere lagoon ji acha anụnụ anụnụ? Maka ọdịnaya nke silica o nwere ma na-egosipụta ìhè a na-ahụ anya.
Ìhè a na-ahụ anya bụ ụdị ike electromagnetic nke anya mmadụ nwere ike ịghọta. Ọ na-agagharị na mita 300 kwa nkeji na ebili mmiri ndị na-enweghị isi nke pin. E wezụga nke ahụ, ụdị agba ọkụ dum na-acha ọcha.
Ọ dị mfe ịhụ nke a site na enyemaka nke prism, dịka anyị mere na ụlọ akwụkwọ. N'ịlaghachi na silica na Blue Lagoon, eziokwu bụ na silica bụ mineral mineral nke silica na oxygen, a bioactive mineral nke na-anọgide kwụsịtụrụ na mmiri ma n'ihi ya echiche. Naanị ya na-egosipụta nrịgo ọkụ nke ìhè a na-ahụ anya, agba ndị ọzọ na-etinye obi gị dum na ya mere lagoon na-acha anụnụ anụnụ nke ukwuu.
Nnukwu nhọrọ ọzọ bụ Mývatn Baths Natural. Osimiri nwere mmiri na-asọ site na Landsvirkjun nke ọma na Bjarnarflag. Ọ na-abata site na ọkpọkọ, na-aga na tank ma site n'ebe ahụ, site na ọkpọkọ ise, ọ na-agwakọta ya na mmiri ọkụ na tank.
Ya mere, ọdọ mmiri ahụ bụ ihe aka ma o nwere okpuru aja di nro na gravel mara ezigbo nma. Mmiri a nwere mineral alkaline, ọ dịkwa mma maka ịsa ahụ ebe ọ na-enweghị disinfectants ebe ọ bụ na mmiri mejupụtara n'onwe ya na-eme ka nje bacteria ghara ịdị.
Ee, o nwere otutu sọlfọ ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na iwepu ọla. Ma maka ụkwara ume ọkụ, ọ bụ ihe magburu onwe ya na maka akpụkpọ ahụ. Agbakwunyere na lagoon na- sauna abụọ, nke uzuoku ya na-erute n'elu site na mkpu na ala, otú ahụ ka ha dị eke saunas na okpomọkụ na-arị elu ruo 50ºC. Ọnọdụ okpomọkụ a nke nwere 100% iru mmiri na-egbu, ma ọ dabara nke ọma ị nwere ike ịbanye n'ime mmiri oyi, n'ihu saunas.
E nwekwara ụlọ nri na ebe a na-anọ atụrụ ndụ. Nwere ike iji ofe achicha, salads, kọfị, tii na achịcha mee ofe ụbọchị. N'oge a enwere onyinye maka imeghe Abụọ ga-akwụ otu. Jụụ! Okenye na-akwụ 5.500 ISK, agbanyeghị na ị na-akwụ ụgwọ iche maka mgbazinye akwa, akwa ịsa ahụ na akwa mmiri. Saịtị a emeghe niile n'afọ ma ọ bụrụ na ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ ha ị ga-ahụ ozi niile na Spanish.
Glacierworld bụ spa dị na Hoffell, ebe mara mma, nwee ugwu ndị mara mma na ice kpụkọrọ akpụkọ. Kpọmkwem, ụlọ nkwari akụ nwere spa ọ bụ naanị kilomita 3 site na glacier, art n'aka Vatnajókull, otu n'ime njem nleta kachasị ewu ewu na Iceland, na-aga n'okporo ụzọ ịga ije ma nwee ọ theụ na odida obodo. Ọ na-enye ụdị ụlọ atọ / casitas na mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na mmiri, n'efu. Ọ bụrụ na ị bụghị ọbịa, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọnụego ụbọchị gị ma nwee ọ themụ.
Geosea bụ meccas ọzọ nke ikuku mmiri nke Iceland. Ọ dị n'akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ na mmiri ya bụ ngwakọta pụrụ iche nke mmiri na mmiri nnu nwere nnu sitere na eriri afọ nke ụwa. Ọ dị n’elu ugwu nke na-ele Skjálfandi Bay na Arctic Circle. Site na ebe a ị nwere ike ịhụ whale na ọbụna ọmarịcha Northern Light.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime - spa ebe Iceland na-enye, ma agwaetiti ahụ na-enye anyị ọtụtụ ihe karịa na usoro nke Okirikiri ala na eme ihe n'èzí. Dịka ọmụmaatụ, nke Ogige Ntụrụndụ Vatnajökull, ndị kasị ibu na mba ahụ. E guzobere ya na 2008 ma nwee glacier nke otu aha na gburugburu ya tupu ụbọchị ahụ abụkwa ogige ntụrụndụ mba. N'ihi ya, ọ bụ otu n'ime ndị kasị ibu na Europe.
Ọtụtụ n'ime ogige ahụ dị n'okpuru okpu glacier, mana odida obodo di iche site na mgbawa ugwu. Na nke a bụ kpomkwem ihe na-eme ya mara mma. Nwere ike ịhụ ka mmiri na-asọba n'oké osimiri, ugwu mgbawa, ugwu, aja ojii a mụrụ na ugwu mgbawa ma bute ya n'akụkụ mmiri site na idei mmiri, nnukwu ọdọ mmiri na mpempe mmiri ice ... Eziokwu bụ, ị agaghi akwusi ileta ebe a n'ihi na o mezue ya njem gaa Iceland.
Ọ bụrụ na ị gbakwunye gastronomy ma jee ije na mmiri ịsa ahụ, Iceland ghọrọ ebe njem njem dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Islandia » Njem Iceland